Battle Royale 'Apex Legends Mobile' ho an'ny iOS dia hanomboka any amin'ny firenena folo amin'ny herinandro ho avy | iPhone News
Hanomboka amin'ny herinandro ho avy any amin'ny firenena 10 hafa ny lalao Apex Legends Mobile. Ity no vaovao tsara, satria vaovao tsara ho an'ny mpampiasa foana ny fanitarana ity lalao ity amin'ny fitaovana iOS sy Android bebe kokoa. Ny vaovao ratsy amin'ity tranga ity dia ny firenentsika, Espaina, mijanona ao amin'ny fotoana famoahana ity.
Araka ny tranokalan'ny Respawn, mpampiasa ny: Aostralia, Nouvelle Zélande, Singapore, Malezia, Filipina, Indonezia, Meksika, Peroa, Arzantina ary Kolombia dia afaka misintona Apex Legends Mobile ho an'ny iOS amin'ny herinandro ho avy, ny ambiny dia tsy maintsy miandry ela kokoa.
Apex, famoahana voalohany andrasan'ny mpampiasa maro
Tsy isalasalana fa lalao tena nankasitrahan'ny mpampiasa ity ary ny Apex Legends Battle dia Battle Royale izay niandry ny fahatongavan'ny ofisialy izay. ho an'ny herinandro ho avy ho an'ny fitaovana iOS. Mety ho mpifaninana lehibe amin'ny Fortnite sy PUBG malaza izany, na dia tsy hita ao amin'ny fivarotana app Apple intsony aza ity taloha (Fortnite) ity, araka ny fantatsika rehetra.
Amin'izao fotoana izao dia ho tonga tsikelikely ity famoahana ity ary tokony hotadidintsika fa ity premiere ity dia tsy manome ny votoatin'ny Battle Royal feno. Toa ny firenena voalohany manana ny lalao misy dia ho afaka hankafy ihany Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder ary Caustic. Rehefa atomboka amin'ny sehatra eran-tany izy io, dia ampiana rafitra sy kojakoja hafa misy ao amin'ny lalao, fa amin'izao fotoana izao dia ho voafetra ihany izany, na dia eo aza ny safidy Cross Play eo anelanelan'ny console sy PC version.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Battle Royale 'Apex Legends Mobile' ho an'ny iOS dia halefa any amin'ny firenena folo amin'ny herinandro ho avy
Ny solomaso AR an'ny Apple dia miditra amin'ny dingana fanamafisana ny famolavolana
Ny iPad dia mbola Mpanjakan'ny takelaka, na dia eo aza ny tsy fahampian'ny tahiry noho ny tsy fahampian'ny chips